Ndakaita bonde naboss wangu kuti ndiwedzere mari yangu – Contos de Sacanagem
← Cefais ryw gyda fy rheolwr i gynyddu fy nghyflog
Kam bërë seks me shefin tim për të rritur pagën time →
Ndakaita bonde naboss wangu kuti ndiwedzere mari yangu
Mhoroi, zita rangu ndinonzi Letícia, ini ndinenge ndasvika 1.80 metres pakureba, nebvudzi bvudzi rechisikirwo uye nemeso akasviba zvakanyanya. Ndakaonda uye ndakaumbika. Dai zvaive zvisiri zera, ini ndaizonyatso investa mune yekumodels basa, asi ini ndakamuka nguva dzaenda. Ndinofanira kugutsikana nemamiriro ezvinhu aripo. Ini ndinoshanda mukambani hombe yekuverenga, ini ndine makore makumi matatu nematanhatu, ndinogona kutaura kuti ndiri mukadzi anoyevedza uye ndakave nehukama hwakawanda muhupenyu hwangu. Kusvikira makore maviri apfuura, muhoro wangu waive 1,400.00. Mari shoma yehupenyu hwandaida kuva nahwo, shure kwezvose ini ndaingoda kuenda kunofara. Neraki, kazhinji yenguva mumakirabhu ehusiku ini andinoenda, ini kashoma kubhadhara nekuda kworunako rwangu uye mumwe wevandinoshanda navo mukambani anondida zvakanyanya, kunyangwe ndakaroora uye ndinonakirwa nazvo. Paakatanga kumanikidzwa zvakanyanya nerunako rwangu, akaisa mari yake mazuva ese mumatei kuyedza kundikunda, ini ndaive benzi, kunyangwe aive murume anokwezva mune ake 49s, ini ndaigara ndichikwezverwa kune vechidiki vakawanda Rimwe zuva, akatadza kudzivisa runako rwangu uye akati kwandiri achinyemwerera: “Chii chichaitika kwauri? Iwe uchaoma zvakadii? Ini ndakashata kudaro? Ndinoda iwe”. Ndakamuudza kuti kana achinge arambana, taizoenda kunodya. Rimwe zuva paive nekucheka mukambani. Iye achiseka achindiudza kuti kana ndikadya naye, ini ndaisazove pane redundancy runyorwa. Ini ndaida mari uye ndakagamuchira chikumbiro. Ndakamubvunza nezvemukadzi wake akandiudza kuti aizove asipo kwemazuva 9, sezvo aifamba kuenda kunze kwenyika, achindikumbira kuti tidye kumba kwake kuitira kuti pasava neanomuona aneni. Ndakaenda kumba kwake, ndisina kana zano mupfungwa. Isu tinodya uye tinotaura nezve dzakasiyana nyaya, asi zvakanyanya nezve hwedu hwega hupenyu. Akandiudza kuti anonyengera mukadzi wake nekuda kwekusarara naye zvakanaka. Pane imwe nguva, akaisa rwiyo ndokundikumbira kuti nditambe semusikana mudiki. Handina kunonoka nekutamba naye. Kutamba kwakaunza nguva dzekuda uye mushure memaawa mashoma ekukurukura uye bhodhoro rewaini, akatanga kunditsvoda. Mushure memaminetsi ekutsvoda kwakanyanya, akaisa ruoko rwake zvinyoro nyoro pasi pesiketi yangu, akabata garo rangu ndokundibata kuti ndishatise akanakisa eangu orgasms. Takazoenda kunorara tiri vaviri, akandibata zvisina mukare akamboita, akayamwa beche rangu kunge pasina mumwe akayamwa, akayamwa minyatso yangu zvekuti ndakarasa huwandu hwemazamu aakandipa husiku hwakanyanya. Patakapedza kuita bonde, ndakagutsikana zvekuti pakanga pasina nzvimbo yekunzwira tsitsi, ndoda kufunga nezvemhedzisiro yezvandanga ndichangobva kuita. Mushure mezvose, aive akaroora uye izvo zvaigona kukanganisa kana kwete hupenyu hwangu hwehunyanzvi, nekuda kwekuremekedzwa kwake semushandirwi mukambani. Zuva rakatevera, ndiri muhofisi, akandibata zvakanaka uye sekunge tanga tisina chinhu. Mazuva maviri gare gare, akandidaidza munzvimbo yekupaka kuti “undiendese kumba” uye ndikazorara naye zvakare. Panguva ino yanga yatove nani pane yapfuura. Aiziva kurapa hure seni, akaisa jongwe rake rakakura re 21 cm sekuda kwangu mubeche rangu uye ndakachema mafaro akawanda uye ndakapenga nezve ruchiva. Ndakanwa mukaka wake wese uye airatidza kuti ndichave mudiwa waaigara achirota, akandirova kumeso, akandirova pamboro ndokundiisa sehure rake rinoteerera uye zvakandifadza zvakanyanya. Rimwe zuva, ini ndinoenda kuhofisi uye vanondiudza kuti mabasa angu awedzera uye kwave nekuwedzera kwe500 reais muhoro yangu. Ivo vakatondiudza it was another director’s decision. Handina kumbobvira ndazvikurukura naye, mushure mezvose zvido zvedu zvaive zvebonde chete. Mumwe mwedzi, ndakagamuchira bhonasi yeR $ 3,500, iyo yaizove yemwedzi, yekuve ine zvibereko uye nguva yese iyi yandakange ndiine hukama naboss wangu, ndaive nehukama huviri hwakafanana. Handina chekuchema-chema nezvazvo, mari yekuwedzera paaccount uye zvachose kunakidzwa pabonde!
Zita rangu ndinonzi José Araujo de Souza, anobva kuBelo Horizonte, Minas Gerais, Brazil, musiki wemawebhusaiti http://www.professorpoeta.com.br uye http://www.contos de sacanagem.com.br uye ini ndinoparidzira muAfricaner CHONA. Ndinozviita kuti ndiwanikwe kune wese munhu, kuburikidza nemawebhusaiti angu kana email josearaujodesouza@yahoo.com.br kune mazano, kutsoropodza uye maonero anogona kushanda sehwaro hwekuvandudza basa rangu. Iwo mawebhusaiti http://www.professorpoeta.com.br uye http://www.contosdesacanagem.com.br haana kutsigirwa uye saka haandiwanire ini chero mari. Ndibatsirei kuti ndivagadzire seizvi, vachipa chero mari yekuchengetedza kwavo, kuburikidza neakaunzi 43.725-5 Banco 3608-0 yeBanco do Brasil kana tengai e-mabhuku angu ku: